शिल्पाले नाभी देखाउदा अदालतमा मुद्धा | Celebrity Nepal
शिल्पाले नाभी देखाउदा अदालतमा मुद्धा
एजेन्सी। बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सुन्दर सुन्दरताका लागि लोकप्रिय छिन् । उनी विशेषत साडीमा सुन्दर देखिन्छिन् । तर एकपटक भने उनी साडीकै कारण समस्यामा परेकी छन् । एजेन्सीका अनुसार सन् २००५ मा शिल्पाले एक ‘अटो शंकर’ नामक कन्नड फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । यो फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो । फिल्मलाई तमिल, हिन्दी र मलयालममा पनि डब गरिएको थियो ।
फिल्मको हिन्दी नाम ‘शिल्पा द बिग डन’ राखिएको थियो । यो फिल्मको तमिल रिमेक रिलिज हुँदा शिल्पाको साडीयुक्त तस्वीर एक तमिल पत्रिकामा छापिएको थियो । तस्वीरमा शिल्पाको नाभी प्रष्ट देखिएको थियो ।
यो तस्वीरमा आपत्ति जनाउदै एक वकिलले अश्लीलता फैलाएको आरोपमा शिल्पाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । शिल्पालाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिए पनि उनी उपस्थित भइनन् । त्यसपछि अदालतले नै उनलाई पक्राउ वारेन्ट जारी गर्यो । शिल्पाको वकिलले दाबी पेश गर्दै शिल्पाको तस्वीर सेन्सर भएको फिल्मको फ्रीज शट भएको बताएका थिए ।
‘यो अलग्गै खिचिएको फोटो होइन । फिल्मकै एक तस्वीर हो । यसकारण अखबारमा छापिएको तस्वीरलाई अश्लील भन्न मिल्दैन’, वकिलको दाबी थियो ।शिल्पाका लागि कैयौं प्रमाण पेश गरिए पनि शिल्पाले भने यो मुद्दातिर ध्यान दिइनन् ।
फुर्वा शेर्पाले बनाए अर्को रेकर्ड
दिलिप र रमितको नेतृत्वमा शिविरमा राहत
निर्देशकले असक्षम भनेर फिल्मबाट निकालिएकी बिद्या...
प्रभासको फिल्म आदिपुरुषले तोड्ने भो बाहुबलीको रेकर्ड
सीता माता बन्न करीना कपूरले मागिन् १९ करोड
तमिल फिल्मका निर्देशक जीएन रंगराजनको निधन
आलिया भट्ट अक्षय कुमार बन्न चाहन्छिन !
रोबिन तामाङ बने हिन्दी सिरिज ‘दि लास्ट...
शुशान्तले अष्ट्रेलियाबाट मोडल निशा संगै अन्य समस्यामा परेकालाई गरे सहयोग
निशालाई निर्देशक समाजको पहलमा अमेरिका बस्ने चलचित्रकर्मीबाट नगद एकाउन्न...
निर्देशकले असक्षम भनेर फिल्मबाट निकालिएकी बिद्या बालन….
लघु चलचित्र ‘बहिनीको चङ्गा’ यु ट्युबमा सार्वजनिक
मेलम्चीका संरचना पुननिर्माण गर्न अभिनेता मल्लको संयोजकत्वमा समिति गठन
यूवा संघले लघु चलचित्र प्रतियोगिता गर्दै